Iyo itsva vhezheni yeCoreBoot 4.11 inosvika nerutsigiro rwezvimwe zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Pano mubhurogu mave makatove nezvakawanda zvakataurwa pamusoro peCoreBoot, chinova chirongwa chinonakidza kwazvo, sezvo chakamutsa kufarira kwevakawanda vanogadzira uye kunyangwe NSA. Uye ndizvozvo achangobva kuzivisa kuvhurwa kwe iyo itsva vhezheni yeprojekti Core Boot 4.11, pasi payo imwe yemahara imwe yekudyidzana firmware uye BIOS iri kuvandudzwa. 130 vagadziri vakapinda mukugadzirwa kweshanduro nyowani uye vakagadzirira 1630 shanduko.
Kune avo vachiri kuziva nezveCoreBoot, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi yakavhurwa sosi imwe nzira kune yechinyakare Yekupinda-Buda Sisitimu (BIOS) iyo yaive yatove paMS-DOS 80s PC uye ichitsiva iyo UEFI (Yakabatanidzwa Inowedzerwa). CoreBoot iri zvakare yemahara proprietary firmware analogog uye inowanikwa kuti izere kuongorora uye kuongorora. CoreBoot inoshandiswa se base base firmware yekutanga hardware uye boot kubatana.
Kusanganisira Graphics chip kutanga, PCIe, SATA, USB, RS232. Panguva imwecheteyo, iyo FSP 2.0 (Intel Firmware Support Package) yezvinhu zvebhinari uye iyo binary firmware yeiyo Intel ME subsystem, iyo inofanirwa kutanga uye kuvhura iyo CPU uye chipset, inosanganisirwa muCoreBoot.
1 Chii chitsva muCoreBoot 4.11?
1.1 Tora CoreBoot
Chii chitsva muCoreBoot 4.11?
Mune ino vhezheni itsva yeCoreBoot 4.11, mazhinji eiyo Tsigiro yemaprosesa akasiyana siyana, software uye zvigadzirwa zvehardware, pakati yatingawana iyo yakawedzera rutsigiro rwemabhodhi mama 25:
Google akemi, Arcada cml, Damu, Dood, Drallion, Dratini, Jacuzzi, Juniper, Kakadu, Kappa, puff, Sarien cml, Treeya naTrogdor.
Lenovo r60, t410, thinkpad t440p uye x301.
Razer blade-kubira kb.
Supermicro x11ssh-tf uye x11ssm-f.
Kunze kwezvokutsigira kwekuteedzera kwakawedzerwa muQEMU-AARCH64 uye kodhi yekuchenesa inoenderera.
Yakabvisa kubatana kwemamwe mafaira emusoro. Iyo kodhi inosanganisirwa nerutsigiro rweIntel chipsets yakave yakabatana, iwo chaiwo mabasa anoitwa mune akajairika madhiraivha.
Chirevo chacho chinotaurawo izvozvo Rakawanda basa rakaitwa kusimudzira rutsigiro rweIntel machipisi zvichibva pane microarchitecture Kaby Lake uye Cannon Lakepamwe neakateedzana machipisi AMD Picasso. Yakagadziriswa chip rutsigiro Mediatek 8173 ARM, machipisi anobva pa RISC-V uye mamwe ekare machipisi akaita seIntel GM45 uye Via VX900. Zvinokurudzirwa Pakutanga rutsigiro rweIntel Tiger Lake machipisi uye Qualcomm SC7180 SoC.
Imwe nzira itsva inomira muCoreBoot 4.11 ndiyo kunatsiridzwa rutsigiro rweyakagadziriswa bhuti modhi (vboot), iyo inoshandisa Google paChannelbook.
Naizvozvi bhuti rakasimbiswa rave kugona kushandiswa nemidziyo isina kunyatso gadzirirwa vboot. Semuenzaniso, rutsigiro rwekutsigira bhutsu rwakawedzerwa kune akasiyana Lenovo malaptop, Siemens maindasitiri makomputa, uye Open Compute projekiti masystem Basa rakaramba richiwedzera kuyerwa tekinoroji tekinoroji kune vboot.
Yakabviswa rutsigiro rwechinyakare maSoCs akavakirwa paAllwinner A10 processor, semuenzaniso Cubieboard akamira kutsigirwa.
Kubviswa uye kuchakurumidza kubviswa kunze kwekutsigirwa kweMIP mavakirwo uye AMD 12h chizvarwa machipisi (AGESA).
Mune libpayload yakapihwa kernels inotsigira USB3.
Iyo libgfxinit raibhurari, inova nebasa rekutanga iyo giraidhi subsystem, inopa inesimba CDClk (Core Ratidza Clock) kumisikidza kutsigira yakakwira-resolution resolution pasina static tsananguro yekugadziriswa. Yakagadziridzwa rutsigiro rweDP uye eDP chiteshi (semuenzaniso, DisplayPort rutsigiro yakawedzerwa yeIntel Ibex Peak machipisi ane Ironlake GPUs).
Wakawedzera rutsigiro rweIntel Kaby, Amber, Kofi, uye Whisky Lake.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve shanduko mune ino vhezheni yeCoreBoot, unogona kuvabvunza Mune inotevera chinongedzo.
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni yeCoreBoot vanogona kuzviita kubva muchikamu chavo chekurodha pasi, iyo inogona kuwanikwa pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Pamusoro peizvozvo mairi ivo vanozokwanisa kuwana zvinyorwa uye rumwe ruzivo nezve chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo nyowani vhezheni yeCoreBoot 4.11 inosvika nerutsigiro rwezvimwe zvishandiso
Iyi imwe nzira yeBIOS yagara ichiita sekunge yakavanzika kwandiri, ini handina kumboziva nzira yekuwana tafura ye Hardware inotsigirwa uye nzira yakatungamirwa yerudzi rweABC, saka ndakarasa mukana wekuparadza muchina wangu.
Munguva yakapfuura, ini ndaida kuishandisa palaptop neyakajairika yakaputsika cdrom kuverenga uye isina USB booting, ini ndakazoziva nezve PLOP Boot Manager uye handina kuzombofarira zvakare.
Chidzidzo muSpanish chinogadzirisa basa pasina kuomarara chingave poindi yakanaka.
Iyo 54th edition yeiyo TOP 500 yakatsikiswa uye Linux iri kuramba ichitonga makomputa akasimba kwazvo pasirese